Inona no hatao raha mahatsapa ianao fa olona ratsy - An-Tsaina
Inona no dikan'ny hoe olona ratsy?
Fanontaniana sarotra izany fa ny fivavahana sy ny filozofia dia niasa hamaly nandritra ny an'arivony taona maro.
Nomena andiana fitsipika hiainana , ampirisihina hanao zavatra amin'ny fomba sasany, ary avy eo nilaza tamintsika fa olona ratsy fanahy isika rehefa tsy miaina mifanaraka amin'izay antenaina efa azontsika.
Ireo fanantenana ireo dia tsy avy amin'ny fivavahana na filozofia foana. Izy ireo koa dia avy amin'ny fianakaviana, namana ary olona manodidina antsika.
Teraka tao amin'ny fianakaviana iray misy ray aman-dreny isika izay amin'ny ankapobeny manandrana ny faran'ny vitany mba hitaizana zanaka sambatra sy salama amin'ny fomba izay misy dikany ho azy ireo. Diso hadisoana anefa ireo ray aman-dreny ireo. Tsy mizara lesona mety foana izy ireo na mihetsika amin'ny fitiavana manohana.
Azon'izy ireo ampianarina ny zanany fa ny fananana eritreritra sasany na ny fanaovana hetsika sasany, na manao ahoana na manao ahoana hatsaram-panahy, dia taratry ny toetra ratsy sy ny faharatsiana. “Nahoana ianao no mieritreritra an'izany? Fa maninona no hataonao izany? Inona no tsy mety ao aminao?'
Ary manana olana hafa ianao avy amin'ny fiainana…
Ireo olona manana fahaketrahana, fitaintainana, aretin-tsaina, na aretina ara-batana bebe kokoa dia mety hiady amin'ny fahatsiarovan-tena ho meloka noho ny fihetsika ateraky ny fitsapana mahazo azy ireo.
Ny fifandraisana manararaotra, ny traikefa mampivadi-po ary ny fiankinan-doha dia mety hiteraka eritreritra ratsy sy fahatsapana ny tena noho ny tsy fitovizan-javatra manodidina ireo zavatra ireo.
Mety terena hanao zavatra ratsy ny olona rehefa any amin'ny toerana ratsy satria misy dikany ho azy ireo amin'izany fotoana izany.
Mety ho tototry ny fihetseham-po misavoritaka ihany koa izy ireo fa tsy azony ny fomba fitetezana, ka mandray fanapahan-kevitra ratsy izy ireo.
famantarana ny lehilahy iray mpiara-miasa aminao no manintona anao
Saingy mahatonga azy ireo ho olona ratsy ve izany?
Tsia ny valiny.
Inona no mahatonga ny olona ho ratsy?
Ny mahatonga ny olona iray ho tena ratsy na tsia dia miankina amin'ny karazana rafi-pinoana sy ny firafitry ny fitondran-tena arahinao.
Saingy tsy liana amin'ny fanomezana valiny mivaingana amin'ireo fanontaniana sarotra ireo izahay. Fa kosa, mangataka vahaolana azo tanterahina izahay, izay afaka manampy anay hifantoka sy hiorina amin'ny tenanay rehefa mahatsapa izany fientanam-po izany isika ary manomboka ny resaka ratsy momba ny tena.
Ny olona ratsy fanahy dia mety ho olona misafidy ny hanao zavatra tsy misy fiaraha-miory, ary manararaotra sy manimba ny hafa ho an'ny tombontsoany manokana.
Misy fahasamihafana lehibe tokoa eo amin'ny olona iray izay diso sy ny olona misafidy ny hanao ratsy.
Mety ho diso sy mandratra ny olona manodidina anao fotsiny ianao satria tsy manam-pahalalana ary tsy nahalala zavatra tsara noho izany.
Fa raha fantatrao fa tsy mety ny ataonao ary mbola misafidy ny hanao ireo zavatra tsy mety ireo ianao dia ho tonga izany mandainga amin'ny tenanao amin'ny fiezahana milaza amin'ny tenanao fa olona tsara ianao.
Ny hevitra hoe tsy misy fenitra mihitsy ny antony mahatonga ny olona tsara na ratsy dia mampihomehy kely. Tsy ny olona rehetra akory dia fanahy diso lalana fotsiny izay mandray fanapahan-kevitra diso.
Ny olona sasany dia tena faly amin'ny fijaliana sy fanaintainan'ny sasany. Ireo dia olona mampiasa ny heriny sy ny heriny hitrandrahana ny hafa hahazoana tombony.
Ny fanaovana ezaka no antony manakiana. Raha tsy manandrana ianao dia tsy afaka ary tsy hahomby. Mila ezaka ny fanitsiana ireo fihetsika ratsy ireo mba tsy hanimba ny tena sy ny hafa.
Raha tsy miasa ianao mba hanitsiana izay fihetsika ratsy mety hanananao dia ho sahirana ianao handresy lahatra ny tenanao fa olona tsara ianao, nefa diso.
Maninona no diso ny mino fa mijaly ianao
Ahoana no ahafahako mahatsapa ho olona tsara kokoa?
Ny fototry ny fahatsapana ho olona tsara kokoa dia ny hetsika. Miasa manitsy ny toetra ratsy anananao ianao ary manolo azy amin'ny safidy sy fitondran-tena tsara kokoa.
Diniho ny fiantraikany amin'ny olon-kafa alohan'ny hiteninao sy ny fihetsikao. Mametraha fanontaniana toy ny hoe: “Tsara fanahy ve ity?” na “Ilaina ve izany?” ary diniho tsara ny valiny alohan'ny handraisana andraikitra.
Indraindray isika dia mila mandray andraikitra izay mety hahatsapa fa ratsy ho an'ny toe-javatra lehibe kokoa.
Ohatra, tsy misy olona te hotsikeraina, fa indraindray ny fitsikerana kely manorina no ilaintsika mba hahavitana zavatra sy handrosoana.
Ny fanakianana dia azo omena amin'ny hatsaram-panahy amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fanafihana ataon'ny tena ary mifikitra amin'ny zava-misy marina.
Ny fisorohana ny fihetsika ratsy tsy ilaina dia manakana ireo fihetsika ireo tsy hanaitaitra ny negativa bebe kokoa. Arakaraka ny maha-ambany ny lanjanao no mavesatra anao dia mora kokoa ny miady amin'ny eritreritra milaza aminao fa olona mahatsiravina ianao.
Ahoana raha tsy manana fitondran-tena ratsy aho nefa mbola mahatsapa tena ho olon-dratsy?
Avy eo ny olana dia mety ho zavatra lehibe kokoa noho ny fitondrana ny zavatra ataonao mifanaraka amin'ny zavatra tianao ho tsapanao momba ny tenanao.
maninona ny zanako lahy efa lehibe no ratsy toetra amiko
Mety ho diso ny fandikanao ny fihevitry ny tenanao sy ny hafa noho izy ireo, na mety handray andraikitra be loatra ianao amin'ny zavatra tsy azonao fehezina.
Misavoritaka ny zanak'olombelona. Ny olona tsara dia manao zavatra ratsy satria tsy mandray fanapahan-kevitra tsara foana izy ireo na mieritreritra ny zavatra ratsy no safidy tsara indrindra amin'ny safidy ratsy rehetra.
Mety handika ny fanaintainana sy ny fifanolanana amin'ny fiainana ho faharatsiana ianao raha tsy izany. Ny fanaintainana dia fanaintainana ary ny fifanolanana dia fifandonana. Ny iray amin'ireo zavatra ireo dia tsy faharatsiana na mila adika ho faharatsiana.
Mety tsy miabo izy ireo, fa tsy mahatonga anao ho olona mahatsiravina koa, na dia nisafidy ny hanao zavatra ratsy aza ianao rehefa niady tamin'izy ireo.
Omeo alalana ny tenanao hitombo sy hahasitrana ny ratra mahazo anao.
Ny olona iray hafa mahatsapa fanaintainana na mandalo fifanolanana dia tsy voatery ho adidinao na enta-mavesatra entinao. Tsy maharatsy anao ny mametraka sy mampihatra fetra hahazoana antoka fa ny fitsapana ny olon-kafa dia tsy hisarika anao any amin'ny toerana ara-tsaina ratsy.
Tonga amin'ny fanamby ireo eritreritra ireo ho ratsy.Manontania tena hoe: “Fa maninona aho no mahatsapa ho lasa olona ratsy fanahy ity?”
Ary zahao raha tsy mety ny fihetsikao ka mahatonga anao hahatsiaro tena ho olon-dratsy na raha mandika ny fihetseham-po ratsy ianao.
Raha diso mandika ny toe-javatra ianao dia mila mitady fomba mahasalama kokoa hametahana azy ao an-tsainao. Ny fanehoan-kevitry ny olon-kafa dia tsy taratry ny toetranao.
Sarotra ve ny mitsahatra tsy mieritreritra hoe olona ratsy ianao?
Fanamby lehibe ny fanitsiana ny eritreritrao saingy azo atao izany. Misy teboka vitsivitsy mila dinihina amin'ny fanovana ny fomba fisainanao ny momba anao.
Mety mila fanampiana amin'ny matihanina ara-tsaina voamarina ianao. Ho an'ny olona maro, ny fiheveran'izy ireo ny tenany tsy miandany dia miorim-paka amin'ny fahazazana, fiainana, na zavatra niainana izay nandoko ny fomba fahitany ny tenany.
Ny fanasitranana, ny fananganana ny fahatokisan-tena sy ny fahamendrehana ary ny fialana amin'ireo zavatra ireo dia matetika mitaky fanitsiana ny fahavoazana naterak'ireo toe-javatra ireo. Mety tsy asa azonao atao irery izany.
Mila fotoana. Ny fanovana ny fomba fisainanao momba ny tenanao sy ny maha-olona anao dia tsy zavatra mitranga mandritra ny alina. Fanoloran-tena maharitra izay ilainao hiasa hatrany.
Izy io dia dingana iray ahafahan'ny fiovana miadana sy mitombo. Mety hahazo tombony kely fotsiny ianao raha mandroso hatrany, manakaiky ireo tanjonao. Fantaro izany ary miomàna amin'ny dianao.
Ny fanitsiana ireo karazana eritreritra ireo dia tsy midika hoe lasa mandrakizay izy ireo. Sarotra ny manova sy mifehy ny eritreritra mandetika.
Matetika kokoa noho izany dia mety ho hitanao fa manana eritreritra tsy ampoizina ianao ary mila mamaha azy io, manatona ny fototr'io eritreritra io, ary avelao ny fihetseham-ponao hivezivezy indray alohan'ny hamaliana ny toe-javatra iray.
Rehefa mandeha ny fotoana dia tokony tsy dia mihena firy amin'ireo eritreritra ireo ianao.
Lasa mora kokoa ihany koa ny miatrika ny fifanolanana sy ny fahasahiranana eo amin'ny fiainana rehefa afaka mamantatra hoe inona izany fa tsy andraikinao. Izany dia manamora kokoa ny famelana ireo fahatsapana faharatsiana ireo ary hanolo azy ireo amin'ny fahatsapana fahatokisan-tena bebe kokoa.
inona no hatao rehefa leo isika
tononkalo fohy momba ny fiainana sy ny fahafatesana
i garth brooks sy trisha yearwood mbola manambady
christina eny amorontsiraka fisaraham-panambadiana
vady tsy mety mahazo asa